Nkuzi nke Kingmax Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
Mkpa Kingmax Kaadị ebe nchekwa Data Recovery Help !!
3 Nzọụkwụ iji weghachite Data si Kingmax Kaadị ebe nchekwa
1 Mkpa Kingmax Kaadị ebe nchekwa Data Recovery Help !!
M nwere nsogbu na m Kingmax 1GB kaadị ebe nchekwa. Kọmputa gosiri ya dị ka a mbughari disk ma mgbe m nwara imeghe ya, a ozi gwara m na kaadị dị mkpa ka e Ị. N'ihi ya, m formatted ya. Ma n'oge na-adịghị m na-eche na-akwa ụta n'ihi na ihe niile m photos na-arahụ. M na-fọrọ nke nta ákwá. Biko nyere m aka! M mkpa n'ezie foto m azụ !!!
Naa, ebe nchekwa kaadị na-ọtụtụ-eji smart ntị, dijitalụ ese foto na ndị ọzọ na dijitalụ ngwaọrụ. Otu isi nke pụrụ ime ka kaadị ebe nchekwa bụ data ọnwụ. Na kaadị ebe nchekwa data nwere ike furu efu ruru mberede nhichapụ, kaadị nrụrụ aka, formatting ma ọ bụ ọbụna virus ọrịa. N'ihi ya, na-esi gị bara uru data azụ, ị chọrọ enyemaka si Kingmax kaadị ebe nchekwa mgbake software.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a mmekọ na ike gị iji weghachite furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ rụrụ arụ faịlụ site na Kingmax kaadị ebe nchekwa, gụnyere SD kaadị, SDHC kaadị na MMC kaadị. Fanye kaadị ebe nchekwa gị n'ime kọmputa gị na-eji Wondershare Data Recovery ike iṅomi ya, na mgbe ị nwere ike mfe weghachite music faịlụ, videos, photos, akwụkwọ faịlụ, wdg si gị Kingmax kaadị ebe nchekwa.
Download Wondershare Data Recovery ikpe mbipute naghachi data si Kingmax kaadị ebe nchekwa ugbu a!
2 3 Nzọụkwụ iji weghachite Data si Kingmax Kaadị ebe nchekwa
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ na Malite Kingmax Kaadị ebe nchekwa Data Recovery
Jikọọ gị Kingmax kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị na ẹkedori Wondershare Data Recovery. 3 mgbake ụdịdị ga-awa mmalite interface: "Echefuola File Iweghachite", "nkebi Iweghachite" na "Raw File Iweghachite".
Iji weghachite ehichapụ ma ọ bụ merụọ faịlụ site na gị Kingmax kaadị ebe nchekwa, ị nwere ike apụ họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode.
Rịba ama: I nwekwara ike na-agụ ntuziaka nlezianya na interface ma họrọ mgbake mode na bụ kacha adabara gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Kingmax Kaadị ebe nchekwa
Mgbe ahụ usoro ihe omume bụ banyere iṅomi gị Kingmax kaadị ebe nchekwa. Ya mere, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị Kingmax kaadị ebe nchekwa na pịa "Malite iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu.
Cheta na: biko hụ na gị na Kingmax kaadị ebe nchekwa nwere ike gosiri dị ka a na diski ike na kọmputa gị na usoro ihe omume window.
Nzọụkwụ 3 weghachite Data si Kingmax Kaadị ebe nchekwa
Gị furu efu faịlụ niile ga na-egosipụta na edemede na ekpe nke usoro ihe omume window mgbe iṅomi. Ị nwere ike ele faịlụ aha elele ma faịlụ ị na-aga iji weghachite a hụrụ ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ha na e ahụrụ, ị nwere ike họrọ ha na pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa. Biko adịghị zọpụta ndị a faịlụ azụ gị Kingmax kaadị ebe nchekwa n'oge mgbake.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Kingmax Kaadị ebe nchekwa Iweghachite Tutorial